बढ्यो जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य, आज कति कित्ता बिक्री भयो ? - UjyaloNepal
२०७८ श्रावण १७ गते, आईतवार प्रकाशित
बढ्यो जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य, आज कति कित्ता बिक्री भयो ?
काठमाडौं । कारोबारमा आएको दोस्रो दिन जीवन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
सातको पहिलो कारोबार दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९८ रुपैयाँ ९० पैसाले वृद्धि भई १ हजार ८८ रुपैयाँ पुगेको छ ।आज कम्पनीको २ लाख २३ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज कम्पनीको २१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो ।
काठमाडौं । युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ सेयरधनीहरुको डिम्याट खाताको आएको छ । उक्त आईपीओ यूएलआई स्टक कोडसहित डिम्याट खातामा आएको हो ।
कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट ११५ रूपैयाँ १३ पैसादेखि ३४५ रुपैयाँ ३९ पैसा सम्मको ओपनिङ रेञ्ज पाउने देखिएको छ ।कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरण पत्रअनुसार कम्पनीको पछिल्लो वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ ११५.१३ रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त नेटवर्थ अनुसार कम्पनीले पहिलो सेयर कारोबारको लागि सो बराबरको ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको हो ।
नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको पहिलो सेयर करोबारको लागि प्रतिसेयर नेटवर्थको विन्दुदेखि त्यसको तीन गुणासम्मको विन्दुलाई लिएर ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने भएकाले कम्पनीले उक्त मूल्य रेञ्ज पाउने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अन्त्यसम्म कम्पनीको नेटवर्थ ११५ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ । अब कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सुचिकृत भएपनि सोही आधारमा पहिलो कारोबारको लागि मूल्य तय गर्दछ ।
कम्पनीले असार २४ गते देखि २८ गतेसम्म गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गरी साउन १ गते बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
अहिले त्यो नेप्सेमा सुचिकृत गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब त्यो नेप्सेमा सुचिकृत भएपछि कम्पनीको दास्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने छ ।
कम्पनीले कुल ६४ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन विक्री खुला गरेको थियो । जसमध्ये ३ लाख २२ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीको लागि, ३ लाख २२ हजार ५ सय सामुहिक लगानीकोषको लागि छुट्याएको थियो ।
बाँकी रहेको ५८ लाख ५ हजार कित्ता ५ लाख ८० हजार ५ सय जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका छन् । उक्त आइपीओमा २१ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ जना आवेदकबाट आवेदन परेको हो । जसमध्ये २१ लाख १२ हजार ७९९ योग्य आवेदन थिए ।
आज ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकरात्मक सर्किट, कुनको कति पुग्यो ?
भोलि देखि मनकामना स्मार्टको शेयर कारोबार सुरु हुँदे ,कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
सिंगटी हाइड्रोको आइपियो बाँडफाँट कहले ?
२०७८ भाद्र ४ गते, शुक्रबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0
भोलि निस्कासन हुदै करोडौको आइपियो , कति दिने आवेदन ?
२०७८ असार २३ गते, बुधबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0